धनकुटाका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै दलित बालिकाको यौन शोषणमा, पैसा दिएर मिलापत्र गराउने प्रयास — JagaranMedia.Com
धनकुटाका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै दलित बालिकाको यौन शोषणमा, पैसा दिएर मिलापत्र गराउने प्रयास
प्रकाशित : २०७७/२/२ गते
धनकुटा । धनकुटाका प्रतिष्ठित व्यक्तिले नै एक बालिकाको यौन शोषण गरिरहेको रहस्य खुलेको छ ।
धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ आत्मारा बस्ने १३ वर्षीय दलित बालिकालाई लामो समयदेखि धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित माथिल्लो गोकुण्डेश्वर माविमा पढाउने मदन अधिकारी, धनकुटा वडा नं. ६ कै गौरी अत्री, सिरान बजारका देवेन्द्र श्रेष्ठ र कचिडेका भक्तबहादुर मगर ललाईफकाई गरी यौन शोषण गर्दै आएको खुलेको हो ।
उनीहरुले लामो समयदेखि ती बालिकालाई ललाईफकाई गर्दै यौन शोषण गर्ने गरेका थिए । तर, ती बालिका गर्भवती भएपछि मात्रै चार जनाले बालिकालाई यौन शोषण गर्ने गरेको रहस्य खुलेको हो ।
बालिकामाथि यौन शोषणको आरोप लागेका चार जना नै ५० वर्षमाथिका हुन् । उनीहरुले सो घटना लुकाउन आफुहरुले बन्ध्याकरण गरिसकेको बताउने गरेका छन् ।
आरोपित चार जनाले नै बिहीबार दिउँसोसम्म पीडित बालिकाका बुवालाई प्रति व्यक्ति ३ लाखका दरले उपलब्ध गराउने गरी मिलापत्रको प्रयास गरिरहेको स्थानीयका भनाई छ ।
चारै जना पहुँचवाला भएका कारण स्थानीयले उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । लामो समयको प्रयासपछि बिहीबार बालिकाको जिल्ला अस्पताल धनकुटामा स्वास्थ्य जाँच गरिएको स्थानीय मणी राई बताउँछन् ।
स्वास्थ्य जाँचका क्रममा बालिका गर्भवती भएको प्रमाणित भएपछि आरोपित चारै जनाविरुद्ध मुद्दा गराउने तयारीमा छन् ।